Kukunda Combo Kwechigadzirwa, Sarudzo, uye Kushushikana | Martech Zone
Iyo Inokunda Combo YeChigadzirwa, Sarudzo, uye Emotion
Mugovera, July 17, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
The Jellyvision Lab yakaburitsa inoshamisa diki eBook pane Maitiro Ekupa Chigadzirwa Sarudzo. Ebook rinofananidza maitiro evatengi muzvitoro kune avo vari online uye rinopa humbowo hwekuti maitiro akafanana.
Iwe unogona kufunga kuti supamaketi yakakura kwazvo, asi Jellyvision inotiyeuchidza kuti kune huwandu husingaperi hwenzvimbo pawebhu, uye nemabatiro aunoita zvigadzirwa zvako uye masevhisi anogona kuita mutsauko wese. Hezvino zvidzidzo zvinodzidziswa (zvemukati zvakatorwa uye zvakatsanangurwa kubva kuBook):
Zvimwe Zvigadzirwa, Vanofara Vatengi - Kana iwe ukaedza kuva newebsite inofadza munhu wese, iwe unogadzira chimwe chinhu chisingadiwe nemunhu. Gadzira zvikamu zvakasiyana kuti ufarirwe nechikamu chimwe nechimwe. Shambadzira icho chaicho chigadzirwa kune chaicho vatengi. Resource: Iyo Ketchup Conundrum.
Asi… Zvimwe sarudzo, Zvishoma Kutengesa - Zvisarudzo zvakawandisa pane peji rimwe chete zvinokanganisa vashanyi uye vanozoenda. Vape iwo iwo zvikamu uye mafirita kuti vagone kuviga zvavasingade.
Kwete Kushushikana, Hapana Sarudzo - Pasina manzwiro, uropi hunongotarisa nekuenzanisa, kuongorora uye kuenzanisa, kuongorora uye kuenzanisa pasina kusvika kumagumo - unova pathologically kusagadzikana. Manzwiro ndeechokwadi anoita kuti iwe ugone kusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana.
Iyo eBook inoenda mune zvakadzama zvakawanda uye inounza mhedziso dzose kudzoka pamwechete. Dhawunirodha kana iwe wawana mukana uye uve nechokwadi chekutevera iyo Jellyvision blog, Iye Anokurukura.
Steve Jobs: Rega Ivo Vadye Nyaya!
Jul 19, 2010 pa 10: 34 AM
Kwete kuva fan of Ketchup ini ndakawana Iyo Ketchup Conundrum inoshamisa inonakidza kuverenga. Zvinotaridza kuti pane chidzidzo chekushambadzira imomo kumwe kunhu.